रेखा र आर्यन सात वर्षपछि मिले पनि ‘फ्लप जोडी’ ! - Purbeli News
रेखा र आर्यन सात वर्षपछि मिले पनि ‘फ्लप जोडी’ !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ०९, २०७४ समय: २१:११:२६
काठमाडौं / सात वर्षपछि आर्यन सिग्देल र रेखा थापाको जोडी ‘रुद्रप्रिया’मार्फत स्क्रिनमा आउँदा फिल्मले उधुम मच्चाउने अपेक्षा थियो। यही कारण निर्माताले आर्यन सिग्देललाई फिल्ममा लिन मोटो रकम खर्च गरेका थिए। तर, चाडपर्वको समयमा पनि फिल्मले सुख्खा व्यापार गरेर निर्माताको अपेक्षामा तुषारापात गरेको छ।
रेखाले बनाएका र खेलेका फिल्म मल्टिप्लेक्समा वर्जित जस्तै थिए। ‘रुद्रप्रिया’बाट मल्टिप्लेक्समा पनि धाक जमाउने रेखाको अपेक्षा थियो। एउटा पत्रकार भेटघाटमा निर्माताले आर्यनले पनि रेखासँग फिल्म खेल्दा तीन दिनसम्म मल्टिप्लेक्स प्याक हुने अपेक्षासहित फिल्म गर्न तयार भएको रहस्य खोलेका थिए। तर, फिल्मका प्रचार सामग्रीले सुरुवातदेखि नै दर्शकमा आकर्षण पदौ गर्न सकेका थिएनन्। यही कारण फिल्मले मल्टिप्लेक्समा अत्यन्त कम शो मात्र पाएन, पाएका शोमा पनि फिल्मले दर्शक पाएन।
फिल्मको विषयवस्तु सही हुँदाहुँदै पनि प्रस्तुति कमजोर हुँदा दर्शकले फिल्म नपराएको विश्लेषण गरिएको छ। फिल्म फ्लप हुँदा सबैभन्दा घाटा आर्यनलाई भएको छ। त्यसै पनि आर्यनको फिल्मी करिअर सुस्त छ। अझ अपेक्षा गरेको फिल्म पनि नचलेपछि घाउमा नुनचुक जस्तै भएको छ ‘रुद्रप्रिया’। योसँगै हिट जोडीको रुपमा रहँदै आएको आर्यन र रेखाको जोडी फ्लपमा दरिएको छ। यो गसिप आजको शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशित छ।